Dr. Tint Swe's Writings: BCG ဘီစီဂျီကာကွယ်ဆေး နှင့် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် သတင်း
BCG ဘီစီဂျီကာကွယ်ဆေး နှင့် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် သတင်း
ဘီစီဂျီ ခေါ် တီဘီရောဂါကာကွယ်ဆေးကို ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကာကွယ်နည်းအဖြစ် သုံး ရ မရ စမ်းသပ်နေတဲ့သတင်းတွေ ထွက်လာတယ်။ တချို့ကလည်း ဝမ်းသာအားရ ရေးကြတယ်။ အတိုင်းအတာသိအောင် ရေးပါမယ်။
မြန်မာပြည်မှာ မွေးကတည်းက ကလေးတိုင်းထို ဘီစီဂျီကာကွယ်ဆေး ထိုးနေတာကြာပါပြီ။ ထိုးနှံမှုရာနှုန်းလည်း အတော်မြင့်မားတယ်။
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်ရောဂါ စဖြစ်တဲ့ တရုပ်ပြည်မှာလည်း ထိုးထားပြီးဖြစ်တယ်။ ၁၉၈၂ ခုထုတ် ဆေးပညာဂျယ်နယ်မှာ ဆောင်းပါးရေးထားတယ်။ ၁၉၃၀ ကျော်ကစတင်အသုံးပြုခဲ့တဲ့ BCG ကာကွယ်ဆေးကို ကျေးလက်ဒေသတွေအထိ ရောက်အောင်ထိုးပေးခဲ့တယ်။ ၁၉၄၉ မှ ထိုးနည်းပြုပြင်တယ်။ အခုထိ ပြည်နယ်ပေါင်း ၂၉ ခုမှာ ထိုးပေးနေတယ်။ ၁၉၇၉ ခုစာရင်းအရ အသက် ၁၅ နှစ်အောက် ကလေးပေါင်း သန်း ၅၀၀ ကိုထိုးထားပြီးပြီ။ ဘေဂျင်းမှာ မွေးစကလေးပေါင်း 2,004,933 ယောက်ကို ထိုးပေးခဲ့တယ်။ လွှမ်းခြုံမှု 97% ရှိတယ်။
ဘီစီဂျီကိုပဌမဆုံး အသုံးပြုခဲ့တာက ၁၉၂၁ ခုနှစ်မှာဖြစ်တယ်။ Bacillus Calmette–Guérin (BCG) vaccine ကာကွယ်ဆေးကို အဓိကအားဖြင့် Tuberculosis (TB) ရောဂါ ကာကွယ်ဘို့ဖြစ်ပါတယ်။ တီဘီရောဂါနဲ့ Leprosy လက်ပရိုစီ ခေါ် အနာကြီးရောဂါ နှစ်မျိုးထူပြောတဲ့တိုင်းပြည်တွေမှာ မဖြစ်မနေထိုးစေတယ်။ တီဘီသိပ်မဖြစ်တဲ့ တိုင်းပြည်တွေမှာ မထိုးမနေရကာကွယ်ဆေးအဖြစ် မသတ်မှတ်ပါ။
ယူအက်စ်အေမှာ မထိုးပါ။ အီတလီမှာ မထိုးပါ။ ပြင်သစ်မှာ ၁၉၅၀ နဲ့ ၁၉၇၀ ကြား မထိုးမနေရ။ ၁၉၄၇ နဲ့ ၂၀၁၀ ကြား ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကို ထိုးထားစေတယ်။ နော်ဝေမှာ ၁၉၄၇ နဲ့ ၁၉၉၅ အတွင်း မထိုးမနေရ။ ယူကေမှာ ၁၉၅၃ ကတည်းက မထိုးမနေရ။ ၂၀၀၅ မှာ ၁၀-၁၄ နှစ်အရွယ်ကျောင်းသားတွေကို ထိုးပေးတယ်။ မွေးစကလေး ရွေးထိုးတယ်။ ဆိုဗီယက်ယူနီယန်မှာ မထိုးမနေရ။ တောင်ကိုရီးယား၊ ဟောင်ကောင်၊ တိုင်ဝမ်၊ စင်္ကာပူနဲ့ မလေးရှားမှာ မထိုးမနေရ။ ဂျပန်မှာ ၅-၈ လကလေးတွေကို ထိုးပေးတယ်။ ထိုင်း ကလည်း မြန်မာပြည်လို။ တောင်အာဖရိက၊ အိန္ဒိယနဲ့ ပါကစ္စတန်မှာ မထိုးမနေရ။
တချို့နိုင်ငံတွေမှာ နည်းနည်း အပြောင်းအလဲ လုပ်ထားတယ်။ သြစတေးလျမှာ ဘီစီဂျီ မထိုးခဲ့ပါ။ အခုစမ်းသပ်မှုကို သြစတေးလျနိုင်ငံ မဲလ်ဘန်းမှာ လုပ်နေတယ်။
တချို့တိုင်းပြည်တွေမှာ Bladder cancer ဆီးအိမ်ကင်ဆာ ကုသရာမှာ 1977 ခုနှစ်ကတည်းက သုံးနေတယ်။ non–muscle-invasive bladder cancer (NMIBC) ခေါ်တဲ့ ကင်ဆာအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ ကင်ဆာပြန်ဖြစ်နှုန်း 67% ကို ကာကွယ်တယ်လို့ တွေ့ရတယ်။
အချုပ်တင်ပြရရင် ဘီစီဂျီကာကွယ်ဆေးကို ကိုရိုနာအတွက် ဘီစီဂျီမထိုးတဲ့တိုင်းပြည်မှာ စမ်းနေတဲ့ဆင့်သာဖြစ်တယ်။
Stickers ဟောဒီက အရုပ်တွေရမယ်
There's no magic bullet. No magic vaccine or thera...
Trial of Coronavirus Vaccine အမေရိကန်တွေက ညံ့တယ်
Coronavirus Vaccine Links ရေးပြီးသမျှ ကိုရိုနာဗိုင...
Coronavirus ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါ စာရင်း
Block Discipline ဘလော့စည်းကမ်း
Stay Home Interview ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်ရောဂ...
Fake Fake Fake ရောင်းတဲ့သူတွေကိုရော ဝယ်တဲ့သူတွေကို...
We don’t know yet ကိုရိုနာ ပြန်ဖြစ်နိုင်သလား
Coronavirus ကားမပြင်တတ်တဲ့ ဆရာဝန်
Coronavirus ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် နှင့် ကုသဆေး
Peas ဆင်းရဲသား ပဲစား၏
Make Your Own Hand Sanitizer လက်ဖြစ် ဟင်းဆင်နီတိုက်ဇာ
Preexisting Conditions That Can Make It Harder to ...
Human Nutrition လူ့အာဟာရ
Coronavirus Transmission ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ဘယ်လိ...
Curam 625 mg ပဋိဇီဝဆေး
Coronavirus ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ၁-၂-၃
N95 Disposable Respirator နှာခေါင်းစည်းတမျိုး
First NHS consultant dies from Covid-19 ဗြိတိန်ဆရာ...
Social Distancing မတတ်သာ ခပ်ခွါခွါ
Coronavirus and Weapon of Biological Warfare ကိုရိ...
Disinfectant Spray ပိုးသန့် စပရေး
COVID-19 Vaccine သွက်သွက်ခါအောင် မှားတယ်
Coronavirus and Health Workers ကိုရိုနာ နှင့် ကျန်...
Coronavirus Vaccine News ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကာကွယ...
Coronavirus Survival ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ဘယ်မှာဘယ်...
Free Bird ငှက်လွှတ်ခြင်း
Army transforms London’s ExCel centre into NHS Nig...
Coronavirus ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကိန်းဂဏန်းများ
Monsoon Rains မုတ်သုံမိုး
Overall health system performance ကျန်းမာရေးစနစ် အ...
Roche coronavirus test gets emergency FDA approval
Calendar မြန်မာပြက္ခဒိန် ပျက်စီးလာခြင်း
Coronavirus ကိုရိုနာက အဲတာတွေကို မကြည့်
Coronavirus ကောင်းတာကို ကြံဖန်ရှာခြင်း
မခိုင်မာတာတွေ လွဲချော်တာတွေ မမှန်တာတွေ လိမ်ညာတာတွေ
A Boiling Pot အပူသည်တွေနေတဲ့ တိုင်းပြည်
Myanmar's Nurses, Doctors Face Eviction as Landlor...
Coronavirus ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် စာရင်း
Coronavirus Test ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကူး မကူး စစ်တ...
Menu အရေမရ အဖတ်မရ
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်သည် ဆွမ်းကွမ်း ရှားပါးစေ၏
Soaps ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် နှင့် ဆပ်ပြာ
Hand Sanitizer သန့်ရှင်းရေး မေးခွန်း
Stay at home order pictures အိမ်မှာသာနေပါ
Hand-made Mask by Pyinnya Swe
Surgical Face Mask အကြိမ်နှစ်ဆယ်လောက် တင်ပြထားပြီး...
Disinfecting surfaces အကြိမ်နှစ်ဆယ်လောက်တင်ပြထားပြ...
Time is Coronavirus ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်သည် အချိန်ြ...
Coronavirus Task Force အိမ်ဖြူတော် နေ့စဉ် ကိုရိုနာ...
Coronavirus Prevention ကာကွယ်နည်းတွေကိုသာ အတိအကျ လ...
Coronavirus ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် နှင့် အိမ်တွင်းသန်...
Famous people who have tested positive for coronav...
Disinfect Your Phone ဖုန်းကို ဘယ်လိုပိုးသန့်မလဲ
Keep Calm and Stay6feet Away တစိမ်းတွေ နေတဲ့ရွာ
25 Celebs with Breast Cancer ရင်သားကင်ဆာနဲ့ အသက်ရှ...
Coronavirus ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် နှင့် မြန်မာပြည်
A Bird ငှက်ကလေး၏ ပရိုဖိုင်းလ်ပုံ
Coronavirus အလွဲအမှားတွေကို အကုန်ပြန်ဖြေချိန် မရှိပါ
COVID-19 survives on surfaces ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ...
Coronavirus Questions ခဏခဏ ရေးတင်ထားပြီး ရေးပြီးသာ...
Coronavirus Medicines ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကုသရေး စမ...
Incubation period ကူးစက်ခံရချိန်နှင့် ရောဂါလက္ခဏာခံ...
Covid-19 လို့ ဘာကြောင့် ခေါ်သနည်း